Governance_XH_Ulawulo | PIVX
Injongo yethu yolawulo lwe-PIVX kukubandakanya uluntu. Sineendlela ende zokufika apho, kodwa kungekudala silindele ukwenza amanyathelo okuqala. Le nkqubo iza kuthatha ixesha elide, kwaye siyibiza ngokuba yiNtsebenziswano yoLuntu oluCwangcisiweyo.
I-PIVX Masternode Abanikazi bavotele kwaye bamkele le nkcazo elandelayo:
“I-PIVX iya kusebenza kwinkqubo ‘yoLuntu oluCwangcisiweyo’ olushintsha ukuhanjiswa kwevoti, ukubandakanya lonke uluntu lwasePIVX.”
Ezi zilandelayo zichaza iinkalo ezi-3 zoLawulo lolawulo nendlela ukuvota kulawulwa ngayo.
Zonke iindawo zolawulo lwe-DAO zilandela inkqubo efanayo ngokuhambisa isiphakamiso, kunye ne-Master Node Abanikazi bokuvota ukuba bamkele / bayichanye isiphakamiso. Ukuvota okunjalo kunokuthi kwenzeke kuphela kwi-Super Block nganye. (Phantse kanye ngenyanga.)
Kukho iintlobo ezi-3 zeziphakamiso:
Oku kuya kunqabile – kungekuze kubekho-kwenzeka, kwaye kuya kufuna umlinganiselo ophezulu wokuthatha inxaxheba (i-Metric ayengachazwa) ngabaphathi be-Master Node (ii-MNOs) ngexesha lokuvota. Okubalulekileyo kukuqinisekisa ukuba nakwii-MNO ezingabandakanyekanga ngokuvota iziphakamiso, zenziwa ukuba i-Manifesto Iproposal ithunyelwe, kwaye ukuba ikwaziswa kakuhle malunga nemibandela echaphazelekayo kwindlela eyiyo kunye nokungenabulungisa .
Ezi ziphakamiso zizona ziqhelekileyo kwaye zikwabiwa ngemali kwingxelo-mali yohlahlo lwabiwo mali. Le mali ingasetyenziselwa nayiphi na into enxulumene nenkxaso yePIVX. Ingaba iindleko ezingaphezulu kweevava, okanye i-Google Apps njl, okanye inokuba yintengiso, okanye ukukunceda uqalise ishishini elingenakulungiswa.
Ezi ziphakamiso zindleko zexabiso kwaye zenze izigqibo zokutshintsha isiseko sekhowudi (umgaqo-nkqubo), okanye izinto eziphambili kwiinguqu kwi-PIVX. Ukuba isigqibo esinjalo sidinga inkxaso-mali, loo nxalenye yemali iya kuba yiphakamiso esiphezulu seNondyebo esithunyelwe emva kokuba i-Proposal Administration Proposition isamkelwe. Yintoni ekhethekileyo malunga noLawulo loPhuhliso lwangaphakathi kukuba abaPhuhli beCore bangenza iziphakamiso ezinjalo ukuba ngaba zingenakwenzeka, okanye ukuba izinto zenzeke ukuba zilandelelanise ukulandelwa kwemigaqo eyahlukileyo evotelwe kwisiphakamiso.